Wax Ka Baro Afarta Kooxood Ee Isagu Soo Hartay Semi-finalka Europa League Ka Hor Isku Aadka La Qabanayo Maanta Oo Jimce Ah. - Laacib.net
Wax Ka Baro Afarta Kooxood Ee Isagu Soo Hartay Semi-finalka Europa League Ka Hor Isku Aadka La Qabanayo Maanta Oo Jimce Ah.
Hal koox oo hore ugu soo guuleysatay iyo seddex kooxood oo markii ugu horeysay ciyaaraya semi-finalka ayaa isagu soo haray wareega afar dhamaadka koobka Europa League, laacib.net ayaana idiin soo gudbineysa xog ku saabsan afarta kooxood ee isku aadka semi-finalka Europa League loo qabanayo maanta.
Ajax, Lyon, Manchester United iyo Celta Vigo oo kala matalaya wadamada Holland, France, England iyo Spain ayaa isagu soo haray wareega afar dhamaadka Europa League xilli ciyaareedkan, iyadoo kooxdii ku guuleysata ay si toos ah ugu soo bixi doonto wareega group-yada Champions League xilli ciyaareedka danbe.
Manchester United (Ingariis)
Waxa ay qiimeynta kooxaha ee UEFA ay kaga jiraan kaalinta 19aad.
Waxa ay tartankaan ka soo bilaabeen wareega group-yada waxaana ay semi-finalka ku soo gaareen iyagoo kaalinta labaad kaga soo baxay group-kooda, waxa ay wareegii 32da ay soo dardareen St-Etienne ka dib waxa ay soo garaaceen Rostov iyagoo xalayto ka soo gudbay Anderlecht.
Koobka Europa League oo loo aqoon jiray UEFA Cup waxa ay Man United ka qeyb qaadatay sagaal jeer, markoodii ugu fiicnaana waa xilli ciyaareedkan oo ay gaareen semi-finalka.
Man United waxa ay heysataa rikoor 20 koob oo horyaalka Ingariiska ah, waxa ay sidoo kale ku soo guuleysteen seddex koob oo Champions League ah iyo hal koob oo Uefa Winners Cup ah.
Waxa ay qiimeynta kooxaha UEFA kaga jiraan kaalinta 25aad.
Waxa ay tartankaan ka soo galeen wareega 32da ka dib markii ay ku soo hareen wareegii group-yada ee Champions League ee xilli ciyaareedkan.
Waxa ay semi-finalka ku soo gaareen iyagoo soo dardaray kooxaha kala ah AZ Alkmaar, AS Roma iyo Besiktas oo ay xalayto rigoore kaga soo talaabsadeen.
Waa markii 13aad oo ay koobka Europa League oo hore loo oran jiray UEFA Cup ay ka qeyb qaadanayaan.
Sida Man United markoodii ugu horeysay ayay semi-final ka soo gaareen koobkaan.
Kooxda Lyon waxa ay heysataa todobo koob oo horyaal ah, laakiin waligood kuma guuleysanin koob Yurub ah.
Waxa ay qiimeynta kooxaha UEFA kaga jiraan kaalinta 28aad.
Waxa ay tartankaan ka bilaabeen wareega group-yada ka dib markii ay ku soo hareen isreebreebka Champions League.
Waxa ay kaalinta koowaad kaga soo dhameysteen Group G, wareegii 32da waxa ay 1-0 kaga soo badiyeen Legia, halka ay wareegii 16ka ay 3-2 ku soo garaaceen kooxda reer Denmark ee Kobenhavn, iyo xalayto oo ay Schalke kaga soo gudbeen guul 4-3 ah.
Waa markii 25aad ee ay AJax ka qeyb qaadaneyso koobka Europa League oo markii hore la oran jiray UEFA Cup.
Waana kooxda kaliya ee kooxaha isagu soo haray semi-finalka ee ku guuleystay koobkaan, iyagoo qaaday xilli ciyaareedkii 1991-92.
Ajax waxa ay hanteen 33 koob oo horyaalka Holland ah, waxa ay sidoo kale ku guuleysteen afar koob oo Champions League ah, hal koob oo UEFA Cup ah iyo hal koob oo UEFA Cup Winners Cup.
Celta Vigo (Isbaanish)
Waxa ay qiimeynta kooxaha UEFA kaga jiraan kaalinta 57aad.
Waxa ay tartankaan ka bilaabeen wareega group-yada, iyagoo kaalinta labaad kaga soo baxay group-kooda waxaana ay wareegyada kala baxa ku soo dhaafeen kooxaha Shakhtar Donetski, Krasnodar iyo Genk.
Waa xilli ciyaareedkii sideedaad ee ay ka qeyb qaadanayaan koobka Europa League ee la oran jiray UEFA Cup.
Waana markoodii ugu horeysay abid ee ay soo gaaraan wareega afar dhamaadka.
Kooxda Celta Vigo waligood kuma guuleysanin horyaalka Spain ee La Liga iyo weliba tartamada Yurub.